केशव दाहालको पहिलो उपन्यास ‘मोक्षभूमि’ बजारमा |
२०७७ आश्विन १९ गते, सोमबार , ०६:१४ मा प्रकाशित
काठमाण्डौं। राजनीतिक अभियन्ता एवं लेखक केशव दाहालको पहिलो उपन्यास ‘मोक्षभूमि’ मङ्गलवारदेखि बजारमा उपलब्ध हुने भएको छ। सोमवार विज्ञप्ति जारी गर्दै किताब पब्लिसर्सले मोक्षभूमि मङ्गलवारदेखि बजारमा आउने जानकारी दिएको हो।
विज्ञप्तिमा, मोक्षभूमिको कथा संवत १२८० बाट सुरु भएको र कथा मुख्यतः मानव सभ्यताले कोर्रा हानेर थिलथिलो बनाएका हजारौं दासहरूको मुक्तिको कथा भएको उल्लेख छ।
मोक्षभूमीको कथासारबारे किताव पब्लिसर्सकी प्रमुख सञ्चालन अधिकृत कल्पना ढकाल भन्छिन्; खस साम्राज्यका चक्रवर्ती सम्राट क्राचल्लदेवले आफूले गरेको युद्ध अपराध र पापको प्रायश्चित्तका लागि जब दस हजार दासहरूलाई मुक्त गरिदिन्छन्, त्यसपछि सिन्जामा उथलपुथल आउँछ। त्यस उथलपुथलसँगै आर्य–खस जातीय श्रेष्ठता र मानव श्रेष्ठताको महाबहस सुरु हुन्छ । बहससँगै सुरु हुन्छ- मुक्त दासहरुको प्रेम, यौन, संघर्ष र मोक्षको लामो, आँधीमय यात्रा । ‘मोक्षभूमि’ त्यही यात्रा, अनुभूति र जीवन भोगाइको रोमाञ्चक वर्णन हो।
ढकालका अनुसार ‘मोक्षभूमि’ ती मान्छेहरुको सपनाको कथा हो, जसको रगत र पसिनामाथि हाम्रो इतिहास उभिएको छ। तर, स्वयं ती मान्छेहरुको इतिहास भने गुमनाम छ ।
लेखक दाहाल भन्छन्, ‘त्यही गुमनाम कुनामा अलपत्र परेका आदिमान्छेहरुको कथा, गाथा र गरिमालाई मोक्षभूमिमा उनिएको छ। तर यो ऐतिहासिक उपन्यास होइन। यो एउटा खास समय, सत्ता र सपनाको कथा हो।’
उपन्यासमा मुक्त दासहरु कता जान्छन् ? उनीहरूको देश खोज्ने यात्रा कसरी टुङ्गिन्छ र ? एक निरंकुश र चक्रवर्ती खस सम्राट क्राचल्लदेवले कसरी बौद्ध धर्म लिन्छन् ? सनातन वैदिक धर्मलाई कसरी हिन्दुकृत गरिन्छ र? प्रेम, धर्म, मोक्ष र साधनाको मार्ग के हो र? यस्ता अनेक प्रश्नमाथि ३७६ पृष्ठको उपन्यासमा विमर्श गरिएको छ ।
उपन्यास देशैभरका पुस्तक पसलका साथै अमेजन र थुप्रैडटकम मार्फत् ई-बुकका रुपमा विश्वभर उपलब्ध भएको विज्ञप्ति मार्फत जनाईएको छ।
वैकल्पिक राजनीति र सामाजिक विषयवस्तुमा नियमित कलम चलाउँदै आएका दाहालको यो पहिलो उपन्यास हो। मोक्षभूमिका लेखक दाहाल साझा पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख समेत हुन।
अघिल्लो सामाग्रीसिंजाको कथा बोकेको दाहालको ‘मोक्षभूमी’
पछिल्लो सामाग्रीदशैँको अवसरमा ‘बिगो डान्स च्याम्प’ हुँदै, प्रथमलाई नगद ५० हजारदेखि फिल्म खेल्ने अवसर
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग पहिलेका सुकुम्बासी आयोग जस्तो होइनः अध्यक्ष ज्ञवाली